Incwadi yeJungle. I-Ruyard Kipling yeklasikhi ehlala ibuya | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli
Incwadi yehlathinguRudyard I-Kipling, yenye yezo zakudala ungaze uphume kwisitayile. Kwaye kwimihla ezayo inokuba yinto elungileyo isipho sazo zonke iintlobo zabafundi, ukusukela kwelona lincinci ukuya kwikhulu. Kwezabo iintlelo ezininzi kunye nohlengahlengiso inqaku labahleli eluntwini okanye elinye kunye nezo zenzelwe ifilimu okanye umabonwakude.
Ndabona nje eyokugqibela Mowgli, ilivo lehlathi, de UAndy Serkis, Inguqulelo entsha mnyama ngakumbi kunangaphambili. Umbuzo kwakhona kukuba ngaba olu hlengahlengiso luyimfuneko. Impendulo inokuba yile Naluphi na uhlaziyo, ukuba lugcina undoqo walo msebenzi kwindalo iphela, wamkelekile. Oku yi uphononongo lwezinye yazo ngokuhamba kwexesha, endigqiba ngazo amanye amabinzana Umsebenzi ka Kipling.
Sonke besifuna ukuba nguMowgli ngaxesha lithile. Umntwana othathwe ngumhlambi we iindlovu omkhulu UAkela njengenkokeli. Kwaye sonke besifuna ibhere efana IBaloo okanye i-panther efana IBagheera. Ewe kunjalo, isiqhulo esincinci kunye ne-hypnotic, isilumko kwaye siyimfihlakalo kaloku. Kwaye esinokuhlala sihamba kuyo Hayi okanye ubabize bonke bajongane nobusuku obubi kakhulu kunye noloyiko lwehlathi, eloyikekayo Shere khan.
Umboniso bhanya-bhanya ubeke ubuso kuye wonke umntu, kodwa ngaphandle kwamathandabuzo, ezo zikwiingcinga ezidityanisiweyo yimigca yoopopayi yenguqulelo yokugqwesa: enye eyenzileyo UWalt Disney ngo-1967. Ikwayile yona intle, njengoko injalo uphawu lwendlu. Kodwa zininzi kakhulu.
1 Incwadi yeJungle (ngo-1942)
2 Incwadi yeJungle (1967) - iWalt Disney
3 Incwadi yeJungle-Ukhenketho luyaqhubeka (1994)
4 Incwadi yeJungle (ngo-2016)
5 UMowgli, ilivo lehlathi (2018)
5.1 Amanye amabinzana avela kwiRudyard Kipling classic
Incwadi yehlathi (1942)
Yayiyinto yokuqala yokubaluleka eyathathwa yaya kwi-cinema kwaye yasayinwa ngabazalwana baseBritane abanemvelaphi yaseHungary UZoltan, uAlexander noVictor Korda. Inye yezo zakudala ze-technicolor zakudala ezilibalekileyo ukuba sikhumbula ii-cinephiles ezininzi kwaye sele sineminyaka yobudala beCinema yangoMgqibelo kunye nomabonakude ofanayo. Yinkwenkwezi yomnye wabadlali abadumileyo belo xesha, iIndiya Sabu. Ukujonga kwayo yenye yala mava ekufanele ukuba abe nawo amaxesha ngamaxesha ukuze aqonde enye ye Eyona midlalo bhanyabhanya Ngalo lonke ixesha.
Incwadi yehlathi (Ngo-1967) -Walt Disney
Eyona yaziwayo neyaziwayo, eyona siye sakwazi ukuyenza kakhulu jonga ucule Kunye nelona lithomalalisa elona bali libalulekileyo u-Kipling wakhe wabhala. Mhlawumbi ikwayile nto inokuphucula kakhulu amaxabiso ubuhlobo nokunyaniseka, ngakumbi kubaphulaphuli abancinci ejolise kubo. Kodwa luphawu lwendlu kwaye yenye yezona klasiki zakhe zaziwayo.
Incwadi yeJungle-Ukhenketho luyaqhubeka (1994)
Sithatha umtsi ngexesha kwaye siyayifumana le nguqulo iphinda ifumane umfanekiso wokwenene. Eli xesha li ukutolika ngokukhululekileyo ukusuka kwantlandlolo apho sine Mowgli omncinci obuyela kwimpucuko ngenxa yothando lwentombi yomkhosi wamaNgesi. Yadalwa ngumdlali weqonga waseMelika owayedumile ngelo xesha UJason Scott Lee nabalingisi baseBritani bathanda UCary Elwes o UJohn Cleese.
Incwadi yehlathi (2016)
Olunye uphononongo kutsha nje kwaye kuyacetyiswa, owalathisa Jon Favreau. Kananjalo ngomfanekiso wokwenene kunye neempembelelo ezizodwa ezenze kakhulu Imovie elungileyo enesingqisho esininzi. Umntwana ongaziwayo UNeel Sethi njengoMowgli. Kwaye ifilimu, ngakumbi kuhlobo lwayo loqobo, sele inomtsalane Abadlali abadumileyo (Idris Elba okanye uScartlet Johannson) ababoleka amazwi ezona zilwanyana ziphambili.
Mowgli, ilivo lehlathi (2018)
Kwaye eyokugqibela, Kukhutshwe kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kwiqonga likamabonakude leNetflix. UAndy Serkis yenza uguqulelo buqu kwaye kumnyama kakhulu ngaphezu kwako konke oku kungentla. Kwaye kuyinyani oko ncama umrhumo obonakalayo yeziphumo ezizodwa kunye nokuzonwabisa kwabalinganiswa abaphambili ngu ubunzulu obukhulu kwiingxabano zakhe, ingakumbi eMowgli, edlalwa ngu Ucacisa kakhulu umntwana uRohan Chand.
Kwaye kunjalo, ye abathandi benguqulelo yoqobo, kubalulekile ukuxabisa amazwi UChristian Bale (UBagheera), uSerkis ngokwakhe (iBaloo), Cate Blanchett (Kaa) okanye Benedict Cumberbatch (UShere Khan).
Amanye amabinzana avela kwiRudyard Kipling classic
Akuncedi ukuba yindoda ... Ukuba andiluqondi ulwimi olusetyenziswa ngamadoda.
Umthetho weJungle, ongaze uyalele nantoni na ngaphandle kwesizathu, uthintela zonke izilwanyana ekutyeni inyama yabantu ... Nangona esona sizathu sokuba kungavunyelwa ukuba ukubulala amadoda kuthetha, kungekudala okanye kamva, ukufika kwamadoda amhlophe ngasemva Iindlovu, ziphethe imipu, kunye namakhulu amadoda anebala elimnyama aneentsimbi, iirokethi kunye neetotshi. Ke bonke abemi behlathi bayasokola.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli » Incwadi yeJungle. Iklasikhi kaRuyard Kipling ehlala ibuya